Moa ve ny SEO sy ny media sosialy mifandray?
Ny fiantraikan'ny Media sosialy sy ny fomba fivilian-dry zareo amin'ny sehatry ny Search Engine Optimization dia iray amin'ireo fanontaniana manan-danja indrindra. Midika izany ny mistery toy izao: ahoana ny fiantraikan'ny tambajotra sosialy amin'ny SEO? Moa ve ireo hevitra roa ireo izay miasa anaty sincères, tsy misy na inona na inona aminy?
Tonga ny mpandroba - ny valiny fohy indrindra dia eny. Saingy tsara kokoa ny mandinika ny fandikana ny dikanteny faharoa sy midadasika kokoa. Andao hiatrika izany - ny media sosialy dia tena manana fifandraisana amin'ny SEO, fa mety amin'ny fifandonana ihany ve izany? Mampalahelo fa mahatsiaro zavatra madinidinika iray fotsiny aho - ny media sosialy dia tsy manana, raha kely indrindra, ny fiantraikany amin'ny SEO. Tsy manampy fotsiny ny fanatsarana ny fikarohana ny fomba fijerin'ny ankamaroan'ny olona izany.
Eto ambany eto dia hanambatra ny soso-kevitro manokana aho miaraka amin'ny fomba fijery sarobidy nomen'ny mpikambana ao amin'ny Google mihitsy - aquanaut replica. Voalohany indrindra, andeha isika haka azy io - ilay mpilatsaka an-tsarimihetsika erantany manerantany dia tsy mbola nanana fanamafisana velively ny haino aman-jery sosialy ho an'ny vokatra mivantana. Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika Eny, eny, ny haino aman-jery sosialy dia mbola eo an-dalam-pahalalahana tanteraka mba ahafahana mijery kokoa ny aterineto amin'ny votoatiny. Ary eny, farany, ny SEO rehetra izany. Inona no azontsika fantarina azo antoka momba ny fiantraikan'ny haino aman-jery sosialy amin'ny SEO? Na inona na inona valiny marina mety hitranga dia miharihary fa ny tambajotra sosialy dia tena afaka manampy ny Search Engine Optimization miasa manontolo. Saingy mbola manontany tena aho, moa ve ny grenady hitadiavam-bola dia hitondra famantarana hafa ara-tsosialy amin'ny algorithm amin'izao fotoana izao?
Amin'izao fotoana izao dia tsy nampahafantarina velively ny algorithm Google search. Izany no mahatonga ny fomba tokana hahatakarana ny lalaon'ny fitondran-tserasera amin'ny fikarohana Google dia manamarina ny mety hitranga rehetra amin'ny test de tena fiainana. Azonareo an-tsaina ve, sa firy ny fotoana fandaniam-potoana sy ny asa mafy ataon'ireo fikarohana ireo? Ok, andao hiverina amin'ny teboka. Ahoana ny fiantraikan'ny tambajotra sosialy amin'ny SEO? Azontsika atao ihany koa ny maka ny haino aman-jery sosialy amin'ny zava-drehetra, saingy tsy misy antony mivantana amin'ny filaharana, araka ny filazan'ny manampahefana Google. Eny ary, na izany aza, tsy midika akory izany fa ny media sosialy dia tsy misy fiantraikany amin'ny filaharana mihitsy, fa noho ny fanamafisan'i Google fa ny media sosialy dia tsy mijoro amin'ny sanda.
Mino aho fa ny valiny marina kokoa na tsia dia azo jerena any amin'ny toerana hafa momba ny teny hoe "fifandraisana. "Raha ny marina dia voalaza ao amin'ny teny manodidina ny Sombin-taratasim-bolan'ny Rebooting Positions White Paper natao tamin'ny Searchmetrics tamin'ny taona 2016. Azoko antoka fa manetsika ny làlana marina ny lehilahy. Noho izany, ny hany valiny marina momba ny fiantraikan'ny haino aman-jery sosialy amin'ny SEO dia miharihary - eny, izany no izy. Saingy mbola tsy misy fifandraisana mivantana na indroa ao. Noho izany, fanapahan-kevitra tsara ny fanaraha-maso ny fampiroboroboana amin'ny fampiasana fitaovana hafa amin'ny media sosialy. Mandritra izany fotoana izany, ny Search Engine Optimization dia mila ny ezaka sy ny fotoana marina ataonao amin'ny fomba samihafa.